Dawladda Puntland oo sharraxaad dheer ka bixisay shixnadda gargaar ee uu wado markab ku soo xirtay dekedda Bossaso. – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo sharraxaad dheer ka bixisay shixnadda gargaar ee uu wado markab ku soo xirtay dekedda Bossaso.
Bossaso, Oct 06 ? Dawladda Puntland ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay markab siday mucaawimo gargaar oo loogu talo-galay dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaannada Puntland kaasoo ku soo xirtay dekedda magaalada Bossaso.
Markabkaan oo sida xamuul dhan 400 oo tan, ayaa dawladda Puntland horay u shaacisay in uu wado mucaawimo cunno iyo dawooyin iskugu jirta taasoo ka timid dawladda imaaraadka carabta, waxaana dadka qaarkiis tuhun galiyeen shixnadda dhabta ah ee markabkaan uu sido.
Wasiirka maaliyadda ee dawladda Puntland Faarax Cali Shire, ayaa si uu u iftiimiyo xaqiiqada xamuulka uu wado markabkaan shir jaraa?id ku qabtay maanta magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari, isagoo tiro-koob dhammaystiran ka bixiyey agabka markabkaasi saaran.
Wasiir, waxaa uu tilmaamay in ay markabkaasi saaran yihiin cunnooyin gargaar oo loo qoondeeyey dadka taabaalaysan ee ku dhaqan deegaannada Puntland, kaasoo qayb ka ah gargaarka adduunku ugu talo galay Soomaaliya, tanna ay tahay mid si gaar ah Puntland loogu qorsheeyey.
Faarax Cali Shire, waxaa uu sheegay shixnadda markabka saaran in ay ka mid yihiin, Bur, Bariis, Sonkor, Caano iyo Timir, taasoo loogu talo galay in lagu quudiyo dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan Puntland.
Wasiir, waxaa kaloo uu sheegay markabku in uu sidoo kale wado booyado iyo baabuur xamuul ah oo loogu talo-galay deeqdaan gargaar in lagu gaarsiiyo dadyawga loogu talo galay ee ku dhaqan gobollada kala duwan ee Puntland, waxaana uu intaasi ku daray mucaawimada in ay ka mid yihiin dawooyin isla dadkaasi lagu dabiibayo.
Shirkaas jaraa?id ee wasiirka maaliyaddu uu qabay, waxaa kaloo uu ku sheegay dawladda imaaradku in ay deeqdaan soo marsiisay shirkadda dhinaca tababarrada ciidamada badda ka caawinaysa Puntland, taasoo ay dhinaca dhaqaalaha ay ka caawiso isla dawladda imaaraadku, waxaana isla markabka saaran guryaha isku xir-xirma kuwaasi oo loo yagleeli doono ciidamada badda Puntland marka ay hawl-gallada bilaabaan.
Dawladda imaaradku waxay deeq tan oo kale ah bishii saddexaad ee sannadkaan soo gaarsiisay Puntland, taasoo iyana iskugu jirtay cunnooyinka nafaqada leh.